छोरीकै लागि ७ वर्षदेखि चाउचाउ मात्र खाएर बाँचेका यी व्यक्ति, यस्तो छ कारण ! « News24 : Premium News Channel
छोरीकै लागि ७ वर्षदेखि चाउचाउ मात्र खाएर बाँचेका यी व्यक्ति, यस्तो छ कारण !
एजेन्सी । चीनको हुबेई क्षेत्रमा पर्ने उहानमा एकजना बाबुले आफ्नी छोरीका लागि पछिल्लो सात वर्षसम्म केवल चाउचाउ मात्र खाएर जिन्दगी गुजारिरहेका छन् ।४९ वर्षका होउ यनवेइ सडक सफाइ गर्ने मजदुर हुन् । उनलाई खेलकुदमा निकै रुची छ । एक चाइनीज वेबसाईटलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘मेरी ११ वर्षकी एक छोरी छिन्, उनको नाम जिनजिन हो । चार वर्षदेखि नै उनलाई जिम्नाष्टिकमा खुबै रुची थियो । तर उनलाई उनको इच्छा पूरा गराउनका लागि मसँग पैसा थिएन । केही वर्षअघि मेरो पत्नीसँग डिभोर्स भयो ।
पछिल्लो पाँच वर्षदेखि छोरीले वुहान इन्स्टिच्यूट अफ फिजिकल एजुकेसनमा पढिरहेकी छिन् र तालिम गरिरहेकी छिन् । छोरीको ट्युसन शुल्क नै वर्षको १४ हजार युआन लाग्दछ । त्यस्तै अन्य पकेट खर्च ३ हजार । छोरीले जिम्नाष्टिकको तालीम सुरु गरेयता होउले आफ्ना लागि कुनै खर्च गरेका छैनन्, चाउचाउ खाएरै दिन गुजारिरहेका छन् । उनको सपना केबल भविष्यमा छोरी राष्ट्रिय जिम्नाष्ट होउन् भन्ने छ र अब्बल जिम्नाष्ट बनाएर एक उत्कृष्ट जिन्दगी प्रदान गर्न चाहन्छन् ।त्यसका लागि जे गर्नुपरे पनि उनी तयार छन् ।